न्यायलयमा बेथिति: 'न्याय परिषद् भष्मासुरको नलिहाड'!
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएका घटनालाई एउटा शिक्षाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । न्यायालय सुधारको बाटोका लाग्ने कति छ भन्ने बारे आइतबार थाहा भइहाल्छ । इजलास कसरी तोकिन्छ त्यसदिनसम्म प्रतिक्षा गरौं । इजलासबाट बाहिरिने र रहने न्यायाधीशबारे पनि इतिहासलाई नै छाड्दिउ । दुवै रायहरू, दुवैका व्यवहारहरू इतिहासका कैद भए । नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो घटना होइन दुर्घटना भयो । यो दुर्घटना दर्ता भइसकेको छ । यसबारेमा भोलिका कानुनका विद्यार्थीहरूलाई अध्याय भयो । इजलास छाड्ने र रहने घटनाले सुबाटो लियो भने राम्रो भयो, कुबाटो लियो भने नराम्रो भयो । सुबाटो लिन्छ वा कुबाटो लिन्छ भन्ने कुरा दुईचार दिन कुरौं ।
संवैधानिक इजलासमा बारम्बार विवाद हुनुमा आफ्नै कारण र व्यवहारहरू छन् । आलंकारिक रूपमा यति भनौं– कसैको बोली, व्यवहार र बचन परिचय दिन्छ । यस परिचयलाई बुझ्नेले कुन रूपमा ग्रहण गर्छ त्यही रुपमा प्रतिक्रिया जनाउँछ । यस दुर्घटनामा जो जो सम्मिलित पात्रहरू छन् उनीहरूको व्यहार, इतिहास लगायतले मुल्यांकन गरिरहेको हुन्छ । त्यही मुल्यांकनको परिणती हो यो । कस्तो आदेश आउँछ भनेर अगाडि नै न्यायाधीशहरू कित्ताकाँट भएर छर्लंग हुनु दु:खद् हो । यस रूपमा प्रकट हुनुहुँदैन । शंका उपशंकाको वातावरणले सम्पूर्णरूपमा न्यायपालिकालाई नै ड्यामेज गरिरहेको छ ।
न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था, सबैको आस्थाको रुपमा यसअघि रहँदै आएको न्यायलयमा कहिलेदेखि विचलन आयो । सत् प्रतिशत थिएन होला तर पनि राणाकाल, पञ्चायतकालमा पनि आस्थाको रुपमा न्यायपालिका थियो । राणा कालको भन्दा पञ्चायतकालमा राम्रो हुनुपथ्र्यो, पञ्चायतको कालको भन्दा बहुदलमा झन् राम्रो हुनुपथ्र्यो, बहुदलमा भन्दा अहिलेको गणतन्त्रमा अझ राम्रो हुनुपथ्र्यो । समय अग्रगामी हुन्छ । १२ बजेपछि १ बज्छ । ११ पछि १२ बज्छ । घडीको सुइ त पछि फर्किदैन । न्यायपालिकाको हकमा समयको सुइ किन पछाडि फर्किरहेको छ भन्नेबारे सजिलै तरिकाले भन्न सकिँदैन ।
प्रधानन्यायाधीश (चोलेन्द्र शमशेर जबरा) केटाकेटी त होइन, बच्चा त होइन । अहिलेको सञ्चारको दुनियाँ यति फास्ट छ कि कुनै पनि कुरा लुकाएर लुक्दैन । के गर्न हुन्छ ? के गर्न हुँदैन ? के गर्दा शंका उत्पन्न हुन्छ ? के गर्दा शंका उत्पन्न हुँदैन भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशजस्तो मान्छेलाई कसैले सिकाइरहनै पर्दैन । म के अनुमान गर्छु भने उहाँले जे गरिरहनु भएको छ उचित गरिरहनु भएको छ । उचितै गरिरहनु भएको होला भन्ने लाग्छ । उहाँकै अनुसार पनि उचितै गरिरहनुभएको छ । उहाँले उचित भनेपछि मैले अनुचित कसरी भन्नु ? उहाँले उचित ठानेको कुरामा मैले अनुचित भन्न पनि मिलेन । उहाँले आफैले आफ्नो आत्मलाई बताउने कुरा हो । आफैले आफैलाई मुल्यांकन गर्ने कुरा हो । अरुले मुल्यांकन गर्दा त्यति वस्तुपरक नहुन सक्छ ।
केही समय यता प्रश्न किन उठिरहेका छन् ? मैले दुईवटा कुरा भन्दै आएको छु । एउटा न्याय परिषद्को हकमा (न्याय परिषद्को अध्यक्ष पनि प्रधानन्यायाधीश नै हुने व्यवस्था छ) ०५२ सालमा ‘धुन्दुकारी शिशु’ भनेको थिएँ । त्यतिबेला न्याय परिषद् जन्मिँदा धुन्दुकारी शिशुको रुपमा जन्मिएको थियो । यसलाई ठीक गरिएन, यसलाई तह लगाइएन भने यसले के के गर्छ के के गर्छ भनेको थिए । अहिले चाहिँ भ के भन्न थालेको छु भने न्याय परिषद्लाई ‘भष्मासुरको नलिहाँड’ हो । न्याय लिकभन्दा बहिर गयो र फेरि लिकमा ल्याइएन भने त दुर्घटना हुन्छ । दुर्घटनालाई रोक्न गहन अध्ययन गर्नुपर्छ ।
न्यायपालिकाको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशको हातमा भएको हुनाले सबैभन्दा बढी सम्वेदनशील हुनुपर्छ । इतिहासदेखि डराउनु पर्छ । अहिले शक्ति भएकाले कोही बोल्दैन र बोल्न पनि सक्दैन । प्रधानन्यायाधीशको अगाडि आँखा जुधाएर बोल्न पनि सक्दैनन् । शक्ति भनेको त्यस्तो हुन्छ । भविष्यमा आफ्ना शाखा सन्ताहरूलाई कस्तो परिचय दिने भन्ने पनि हुन्छ । सुनाम दिने कि दुर्नाम दिने भन्ने कुरा आफै हातको कुरा हो । जस्तै सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेका शाखासन्तानले अहिले हामी फलानाका यति पुस्ता हौं भनेर भन्न सक्दैनन् । उनीहरूले परिचय जोड्नै चाहँदैनन् । तर भीमसेन थापाका सन्तानले हामी यति पुस्ता उति पुस्ता भन्छन् । उनीहरूलाई पुर्वजले दिएको नासो हो । त्यसैले मैले देखेको मात्रै सबै राम्रो म मात्रै विद्वान छु कसैले पनि सोच्न हुँदैन ।
(सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीसँग समाचारदैनिकका सन्तोष भट्टराईले गरेको कुराकानीमा आधारित)
बिहीबार २०, जेठ २०७८ १८:३६:३८ मा प्रकाशित